Waaxda Howd oo ku guulaysatay tartanka kubadda Gacanta Waaxyaha degmada Shingaani+Sawirro
Sunday, June 16th, 2019 - 20:13:25
Friday March 15, 2019 - 10:34:19 in Wararka by Hussein Hadafow
Waaxda Howd ayaa ku guulaysatay tartanka Kubadda Gacanta waaxyaha degmada Shingaani kadib markii ay fiinaalaha kaga adkaatay waaxda Jabuuti.
Kulanka fiinalka oo xilli habeen ah la ciyaaray waxaa kasoo qayb galay masuuliyiinta maamulka Gobolka oo uu hogaaminayo guddoomiyaha Gobolka ahna Duqa magaalada Muqisho Inj. Cabdiraxmaan Cumar ( Yariisoow) Masuuliyiinta degmada Shingaani iyo marti sharaf kale.
Kulanka fiinaalaha oo aad u xiiso badnaa ayay labada koox soo bandhigeen ciyaarad loogu bogay. waax Howd ayaa bilowga hore aad uga gacan saraysay dhigeeda Jabuuti iyadoo hogaankadheeraystay qaybtii hore ee ciyaarta oo ay kaga gacan saraysay 8-3.
Marki laysku soo laabtay Jabuuti ayaa soo kabasho wanaagsan samaysay iyadoo barbaro 12-12 ka dhigtay waxaase daqiiqadihi u dambayeeyay ciyaarta laga dhaliyay 2 gool taasoo ka dhigan in koobka ay 14-12 kula hoyatay waaxda Howd.
Guddoomiyaha gobolka ayaadegmada Shangaani ku amaanaycayaaraha heer ooxilli habeen la qabtay taasoo muujinaysadoorka ay degmada Shangaani.
Waa marki labaad oo ay degmad Shangaani qabanayso tartanka Kubadda Gacanta waaxyaha waanadegmada Kaliya ee degmooyinka Gobolka Banaadir ee laba jeer .